ဆမ်ဆောင်းသည် CinemaCon တွင်မျက်နှာပြင်နည်းပညာပြသသောကြောင့်ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူများခေတ်နောက်ကျသွားနိုင်သည် NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show ၏ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်
ပင်မစာမျက်နှာ » အသားပေး » Samsung ကရုပ်ရှင်ပွဲတော်စစ်ဆေးခြင်း Projector ပေါရာဏ Make ရနိုင်ပါသလားဒါက CinemaCon မှာမျက်နှာပြင်နည်းပညာကိုဖေါ်ပြရန်
Samsung ကရုပ်ရှင်ပွဲတော်စစ်ဆေးခြင်း Projector ပေါရာဏ Make ရနိုင်ပါသလားဒါက CinemaCon မှာမျက်နှာပြင်နည်းပညာကိုဖေါ်ပြရန်
Samsung က, တောင်ကိုရီးယားအီလက်ထရောနစ်ကုမ္ပဏီကြီး, CinemaCon 2017 မှာ၎င်း၏ဆန်းသစ်ရုပ်ရှင်ရုံမျက်နှာပြင်နည်းပညာကိုမိတ်ဆက်ထားပါတယ်ကြောင့်ရုပ်ရှင်ရုံတစ်ရုပ်ရှင်ပို့ဆောင်တဲ့နည်းလမ်းအဖြစ်အဆိုကိုရုပ်ပုံပရိုဂျက်တာတစ်ခုအလေးအနက်ခြိမ်းခြောက်ကြည့်ဖို့ကြိုးစားပါတယ်။ အမှုအရာများ၏လမ်းနှင့်အသစ်သောလမ်းကို Samsung ရဲ့အသစ်အနာဂတ်နည်းပညာကဦးဆောင်လျက်ရှိသည်အကြောင်း re-အလို့ငှာဒီနှစ် CinemaCon မှာသရုပ်ပြအချို့သောနည်းပညာရှိခဲ့သည်။
CinemaCon ပြဇာတ်ရုံပိုင်ရှင်များအမျိုးသားအစည်းအရုံးများအတွက်တရားဝင်နှစ်စဉ်ကုန်သွယ်မှုပြပွဲဖြစ်ရပ်နှင့် Las Vegas မှာကဲသာဘုရင်၏နန်းတော်မှာယခုအပတ်ရာအရပျကို ယူ. 80 နိုင်ငံများထက် ပို. အနေဖြင့်ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ဧည့်သည်များတက်ရောက်ခဲ့သည်။ အသစ်မျက်နှာပြင်နည်းပညာကိုဖွင့် 4K ရိုးရှင်းစွာအကာအရံအနုတ်ငွေ screen ပေါ်မှာတပ်ဆင်ထားနိုင်ပါတယ်နားမှာခြမ်းထားရှိပြား LED သုံးပြီးအကြံပြုထားသည်။ ဒါဟာအတော်လေးစာသားရုပ်ရှင် projected မည်ဖြစ်ကြောင်းရာမှကြီးမားသောအရွယ်အစားနံရံတစ်ခုဖန်တီးနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ Samsung ကကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံး High Dynamic Range ကို LED ပြဇာတ်ရုံ display ကိုထုတ်ဖော်ပြသ, ရုပ်ရှင်ရုံမျက်နှာပြင်မကြုံစဖူးရုပ်ပုံအရည်အသွေးသည်ကယ်တင်နှင့် Orleans တွင်ဟိုတယ်နှင့်ကာစီနိုမှာတည်ရှိပါတယ်ပြဇာတ်ရုံမှာပိုမိုမြင့်မား vibrancy နှင့်တိကျမှန်ကန်မှုကိုယခုအပတ်နှင့်အတူဘဝကိုရုပ်ရှင်များနှင့်အခြား on-screen ရဲ့ contents တတ်၏။
Sang Kim က Samsung ကအမေရိက၏ဒုတိယသမ္မတဖော်ပြ, "အဆင့်မြင့်မှာ-အိမ်တွင်းဖျော်ဖြေရေးစနစ်များနှင့် streaming များပလက်ဖောင်းတိုး၏လူကြိုက်များသည့်အတိုင်းရုပ်ရှင်ရုံစားသုံးသူရိုးရှင်းစွာဘယ်နေရာမှာမဆိုအခြားကြုံတွေ့ရမရနိုငျသောတုနှိုင်းလို့မရနိုင်တဲ့မြင်ကွင်းအတွေ့အကြုံအတွက်တစ်ဦးဦးတည်ရာအဖြစ်သူတို့ကိုယ်သူတို့နေရာရမည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အသစ်သောရုပ်ရှင်ရုံမျက်နှာပြင်နည်းပညာကိုသူတို့ရှိသမျှသည်မြင်ကွင်းတစ်ခု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းလျှင်အဖြစ်ကြည့်ရှုခံစားရမည့်အခြေအနေတစ်ရပ်ကိုဖန်တီးကြီးတွေမျက်နှာပြင်မှတစ်ဦးထက်ပိုအစွမ်းထက်နှင့်မြင့်မားသောအရည်အသွေးရုပ်ပုံတတ်၏။ "
အဆိုပါ 34 ခြေလျင် Samsung ကရုပ်ရှင်ရုံမျက်နှာပြင်ကိုအလွယ်တကူခေတ်သစ်ပြဇာတ်ရုံအတိုင်းအတာရှိကြတယ်။ (4 4,096 x) resolution ကို 2,160K မှာ LED ရုပ်ပုံအရည်အသွေးကိုပို့ဆောင်အပြင်, မျက်နှာပြင်ကိုလည်းနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်, ယုံကြည်စိတ်ချရနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ရုပ်ရှင်ရုံများတွင်အရည်အသွေးကတစ်ယူနီဖောင်းများနှင့်အဆင့်မြင့်သေချာစေရန်အသုံးပြုသောအလွန်အမင်းတန်ဖိုးထား DCI သတ်မှတ်ချက်များကိုကျော်လွန်နေပါသည်။
အဆိုပါရုပ်ရှင်ရုံမျက်နှာပြင်ရဲ့တိုက်ရိုက်-lit LED နည်းပညာကိုအမှန်တကယ်တိုးတက်တူညီနေမှုနှင့်အတူစံရုပ်ရှင်ရုံ projector ကို (10fL နှိုင်းယှဉ် 146fL) ကကမ်းလှမ်းခဲ့သည်ထက်နီးပါး 14 ကြိမ် သာ. ကြီးမြတ်တဲ့အထွတ်အထိပ်ရောင်ခြည်အဆင့်မှာ on-screen contents တွေကိုပြ, ရုပ်ရှင်ရုံမှ High Dynamic Range (HDR) ကယ်တင်နှင့် optical ပုံပျက်များနှင့်ဝင်ရောက်စွက်ဖက်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာအနာဂတ်ပြပွဲမှာလည်း viewer ရဲ့မျက်စိဖမ်းယူလိမ့်မည်ဟုအလွန်တိကျမှန်ကန်နှင့်သာလွန်အရောင်တင်ဆက်မှုပေးထားပါတယ်။ 1 ဆနျ့ကငျြဘအချိုးအစား: complementary Ultra-contrast နဲ့အနိမ့်သေံအဖြူအမည်း setting များကိုတောက်ပသောအရောင်အဆင်းများနှင့်တစ်ဦးနီးပါးအသင်္ချေမှာအနက်ရှိုင်းဆုံးလူမည်းနှစ်ဦးစလုံးတခုအဖြစ်ဖို့ screen ကို enable ။
အဆိုပါ Samsung ကရုပ်ရှင်ရုံမျက်နှာပြင်လက်ရှိတွင် DCI လက်မှတ်ဖြစ်စဉ်ကိုခံယူခြင်းနှင့်မကြာသေးမီကတိုကျိုမြို့ရှိ Keio University ကလိုက်နာမှုစမ်းသပ်ပြီးစီးခဲ့သည်။
Visual Display ကိုစီးပွားရေး Samsung ရဲ့ဒုတိယသမ္မတ, Seog-gi ကင်ကပြောပါတယ်, "ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရုပ်ရှင်ရုံများ၏ပစ်လွှတ် display ကို LED မျှသာဒစ်ဂျစ်တယ်ဆိုင်းဘုတ်စွမ်းအားဖြင့်ပြည့်စုံအဆုံးမှအဆုံးသို့ပြဇာတ်ရုံအတွေ့အကြုံအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရူပါရုံကိုမျက်နှာသို့နောက်ဆုံးပေါ်ခြေလှမ်းဖြစ်ပါတယ်။ Touch-screen ကို Self-လက်မှတ်ဝယ်ရန် kiosk ကနေဒစ်ဂျစ်တယ်လိုက်လျော menu ကိုပျဉ်ပြားများနှင့်အပြန်အလှန်ရုပ်ရှင်ပိုစတာအထိခေတ်မီနည်းပညာများမှတစ်ဆင့် Samsung ကပြီးသားရုပ်ရှင်ရုံဖောက်သည်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုတိုးတက်စေခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းလည်ပတ်ထိရောက်မှုမြှင့်တင်ရန်ကူညီပေးနေသည်။ ကျနော်တို့ပြဇာတ်ရုံစက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်စုစုပေါင်းဖြေရှင်းချက်ပေးသူအဖြစ်အစေခံရန်ဆက်လက်နှင့်ဖောက်သည်အတွေ့အကြုံကိုတိုးတက်စေရန်အသစ်နှင့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်နည်းလမ်းတွေရှာဖွေတာမျှော်လင့်နေပါတယ်။ "
isovideo, viarte, HDR, ဆူညံသံလျှော့ချရေး, HDR / WCG, HEVC / AVC, HEVC, JCT-VC ကို, 2015, ဘစ်နှုန်းလျှော့ချရေး, စွဲငြိဖွယ်ရာ, UHD / 4K / HD ကို H264 / H265, ဝါဆော SoftAtHome, MStar, CES2017	2017-03-30
ယခင်: ရောဘတ် Legato SMPTE အတူမိတ်ဖက်အတွက်ထုတ်လုပ် 2017 NAB Show ကိုရဲ့ "ရုပ်ရှင်ရုံညီလာခံ၏အနာဂတ်" မှာ Keynote တင်ပြ
နောက်တစ်ခု: Riedel စိန့် Moritz အတွက် 2017 FIS Alpine ကမ္ဘာ့ဖလားနှင်းလျှောစီးချန်ပီယံမှာဆက်သွယ်ရေးအတွက်၎င်း၏ရှေ့ဆောင်အခန်းက္ပမျဉ်းတား